Ciidamada Somaliland Oo Guul Balaadhan Ka Gaadhay Dagaalkii Ay Saaka Ku Soo Qaadeen Maleeshiyaadka Puntland | Marsa News
Ciidamada Somaliland Oo Guul Balaadhan Ka Gaadhay Dagaalkii Ay Saaka Ku Soo Qaadeen Maleeshiyaadka Puntland
Hargaisa:(Marsanews) Duulaan ay saaka ku soo qaadeen maleeshiyaadka puntland ciidamada qaranka somaliland ee fadhiisinkoodu yahay tukaraq ayaa ciidamada somaliland ay guul balaadhan ka gaadheen kadib markay jabiyeen ciidamadii soo weeraray.
Dagaalka oo sadex jiho ka bilaabmay marqudha saaka hiirtii hore oo ay maleeshiyada puntland ka soo weerartay ciidamada qaranka somaliland ayaa khasaare balaadhan la gaadhsiiyay maleeshiyaadkii weerarka ahaa islamarkaana laga qabsaday saanad hub iyo gaadiid dagaal iyo waliba maxaabiis ciidan ah.
ciidamada somaliland ayaa fadhiisimo cusub oo kale ka qabsaday maleeshiyadii weerarka ku soo qaaday iyadoo haatan dagaalku istaagay islamarkaana uu jiro dhaawac fudud dhinaca ciidamada somaliland balse aanu khasaare kale wali la sheegin halka ciidamada maleeshiyaadka puntlnad iyada khasaare laxaadle la gaadhsiiyay.
Taliyaha ciidanka qaranka somaliland ayaa sheegay inay gaadhi doonan meelkasta oo maleeshiyadu ay kaga soo duulayso maadaamo ay joojin waayeen dagaalka ay ku hayaan ciidamada qaranka islamarkaana sheegay inay guul balaadhan ka gaadheen.
Dhinaca kale maamulka maleeshiyada Puntlanad ayaa qoraal ay dagaalka kaga hadlayso sheegtay inay iyadu weerarka soo qaaday islamarkaana aanay joojinanayn dagaalada ilaa ay qabsanayaan dhulka laga haysto waa sida ay hadalka u dhigeene.